ကြောင့်အကြောင်း ယွာသူသပ်သေ Me | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ကြောင့်အကြောင်း ယွာသူသပ်သေ Me	24
ကြောင့်အကြောင်း ယွာသူသပ်သေ Me
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 8, 2014 in My Dear Diary, Poetry | 24 comments
အမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ် မျှတယံ ကြောင်ကြီးတောင်းပံ အသနားခံ
Mr. MarGa says: စုန်းဖျက်မယ့်အစား
စားဖိုမှူး ကျောက်စ် လက်ကို အပ်မယ်
တောတွင်းပျော် says: ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ သမိုင်းက
ရွာသူတကာရဲ့အမုန်းတော်ခံကြီးပါလား…
ဦးကျောက်ခဲ says: ခေတ်မှီအောင် ယွာသူတိုင်း ကြောင်သဘုံကို ဘလော့ကြသည်…
အတော်လေးခန္ဒီပါရမီ ပြည့်စုံပါမှ ကကြောင်ဂျီးနဲ့ စဂါးပြောနိုင်၏…
pooch says: အော် အဲ့လိုလား ဖြစ်ရလေ အူးကြောင်ရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: .ဒီကေဘီအေ…စိတ်ညစ်တယ်…
aye.kk says: မေတ္တာပန်းများပွင့်လန်းရာမြေ
ဂဇက်ဆိုတဲ့တို့ ရွာလေ ။
စကားပုံဆိုတာ မမှားအောင်လို့ ပုံပမာပေးထားတာ။။
ခင်ဇော် says: နည်း သေး တယ်။
ကန္နားစီး မိဂီ says: ဖားတုလို့ ကြောင်ခုန် ..အိုင်ပျက်ယုံပေါ့ဗျ…
weiwei says: တယ်လဲ ခန္ဓီတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ငါပါလားလို့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ကျုပ်တစ်ယောက်ကိုမှ မဆဲဖူးပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 660
Iris says: ​ကြောင်​ ​ကြောင့်​ ရွသူ သတ်​​သေ ဆို​တော့။ ဘယ်​သူများဦး​ကြောင့်​ကြီး​ကြောင့်​​သေသွားပြီလဲလို့။
Kaung Kin Pyar says: ကြောင့်အကြောင်းသိတဲ့ရွာသူတွေ သက်သေရှိတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းပါ အိုင်းရစ်ရေ။
Ma Ma says: သက်သေကလည်း တခြမ်းလိုက်ကြီး။
ရွာသားတွေလည်း ကြောင်ကြီးကို သတ်သေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
(သက်သေမဟုတ်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: တနားထှာ.. ​ကြောင်​သားစားမို့.. စား​သေးပါဘူးကွယ်​..
Wow says: အိုက်လော့ စားချင်သီ စိတ်တွေမလျော့ရင် ကြောင်ဘာဘီကျူးရွာ့ပွဲမာ လုပ်စားဂျမယ်ဆိုလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: မျက်ရည်တောင် ပတောက်ပတောက်ကျလောက်တယ်
ကြောင့်ဘဝကြောင့် အကြောင်း ဒဇေ့ဒဇောင်းရယ်
အလင်းဆက်ဆီမှာ ဦးကြောင်ကြီးရေးတဲ့ အပြာစာအုပ်တွေ
အလင်းဆက်က ကော်မရှင်ခနဲ့ ရောင်းပေးနေတယ်ဆိုပြီး
ကျနော့်ဆီ လာမေးဝယ်ဖို့ လုပ်ကြတယ်
ကျနော်က ဘာစာအုပ်မှ မရှိပါဘူးဂျာလို့ ပြန်ပြောနေရတယ်
ဦးကြောင်ရေးတဲ့စာအုပ်ဆိုလည်း အောင်ရင်ငြိမ်းလိုပဲ နေမှာပါ
အဲ့ကောင်မလေးတွေကို ဦးကြောင်က ဆဲတယ်တဲ့
ဝယ်မယ်ဆိုပြီး မဝယ်တဲ့ လူလိမ်မတို့
ကျနော့်ဆီ ပြန် လာကြပြန်တယ်။
စာအုပ်ရှိလည်း ရောင်းစမ်းပါ ဆိုပြီး ဂျီတိုက်ကြတယ်။
ဦးကြောင်ကြောင့် ရီရခက် ငိုရခက်အချိန်တွေ ရှိခဲ့တယ်။
ဖားသက်ပြင်း says: ညည်းများပီ ဆက်ဆက်ရေ…
ကျော့် စာတွေတုန်းကလည်း ညည်း ဒီလိုဗဲ…
ဒါတောင် ကျုပ်က ဘူ့မှ သွားဝယ်မပြောရသေး..
ကိုကိုကြောင့်ခံစားချက်ကို … ကိုကိုဖား စာနာမိဘာဒယ်…
အော်.. ဆက်ဆက်… ဆက်ဆက်…
ဂျင်ပေါ်ကထုံး … ပန်ကာထိပ်က ဇာလ၀ီ…
ကိုယ်ကပဲ ပြေးအောင် ဦးဗျူး (ကျနော်ဗျူးလို့ တချိုးပြေးသွားကြတယ်)
ဒီကြောင်နဲ့ ဒီဖားကို စာတစောင် ပေတဖွဲ့ ပိုစ့်တင်ပြီး ဂုဏ်ပြုပါဦးမယ်။
Wow says: ဟိုနေ့ကပဲ ညီး.. ဘူ့မှမရောင်းဝူး ဂျီးတော်မို့ဆိုပီး လာပြတဲ့စာအုပ်တွေလား…
ကကြောင့်ကို ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ငင်….
ကွကိုယ်တောင် ဖတ်လို့ အားမရသေးဘူး ။
ဝယ်ဖတ်မိနေပြီလား ဂျီးတော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: နာအကြွေးမရလို့မ၀ယ်လိုက်ဝူးလေ… Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: တော်တော်ရီရတယ် :D
အူးကြောင်ကတော့တကယ့် စတိန်းလက်စ်စတီးပဲ hahaa
Yae Myae Tha Ninn says: ၇၈၆မာမွတ်
ဝင်ဆော်ဒယ်၊ တမျိုးကြီးပဲ… ဂဇက်ထဲမှာ ထွဋ်ပါတာ ဘယ်သူရှိသေးလဲ ဟင်… ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုပြောတာလား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 579
တိမ်မည်း says: အူးကြောင် မွေချက်က နိုင်းလောက်ရှိဒယ်…
လွတ်တဲ့ ရွာသူမရှိဖူးထင်ပါ့…. နောက်နောင် ရွာထိပ်မှာ စာကပ်ထားရမယ်…
ရွာထဲသို့ ဝင်လျှင် ရွာသူဟု မပြောရ…